Black Magic: BRAIN - THE LARGEST SEX ORGAN
Posted by Black Magic | Posted in ကျန်းမာရေး , ဗဟုသုတများ | Posted on 1:53 PM
လေ့လာမှု တစ်ခုအရ ဓာတ်ပုံထဲက လူတစ်ယောက် ကြည့်ကောင်း၊ မကောင်းကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ တစ်စက္ကန့်ရဲ့ လေးပုံ တစ်ပုံသာ ကြာတယ်လို့ သိ ရပါတယ်။ ဒီသတင်း အချက်အလက် တွေကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာဖို့ မတူညီတဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်း တွေက အလုပ်လုပ် ကြရတာပါ။ ပထ မဦးဆုံး နားလည် နိုင်စွမ်း (Understanding) နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိနားလည် နိုင်စွမ်း (Self-awareness) ကိုဖြစ်စေတဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အ ပိုင်းတွေ လှုံ့ဆွခံ ရပါတယ်။ အဆင့်မြင့် အလုပ် တွေကို လုပ်ပေးတဲ့ နေရာ တွေကနေ အမြင် စွမ်းအားကို သိရှိစေတဲ့ နေရာကို တချို့ သတင်း အချက်အလက် တွေကို ပိုမိုသိသာ နိုင်စေဖို့ ကြိုတင် တပ်လှန့် ထားပေး နိုင်ပါတယ်။ ဒါက သတင်း အချက်အလက် အပေါ်ကနေ အောက် ကို စီးဆင်းတဲ့ ပုံစံ (Top down) ပါ။ အမြင်အာရုံကို သိစေတဲ့ နေရာနဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ နေရာတွေ ကနေလည်း အဆင့်မြင့် လုပ်ငန်း တွေ လုပ်တဲ့ နေရာ တွေဆီကို သတင်း အချက်အလက်တွေ စီးဆင်း နိုင်ပါတယ်။ ဒါက အောက်ကနေ အပေါ်ကို စီးဆင်းတဲ့ ပုံစံ (Bottom up) ပါ။ ဦးနှောက်နှင့် လိင်မှုကိစ္စ
လိင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အထွဋ်အထိပ်ရောက် ပြီးမြောက်ချိန်အထိ ပါဝင် ပတ်သက်နေတဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေကို သိပ္ပံ ပညာ ရှင်တွေ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Hippocampus ကမှတ်ဉာဏ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင် ပေးတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က လိင်မှု ကိစ္စ အတွေ့အကြုံ တွေကနေ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ အမြင်အာရုံ၊ အနံ့ခံ အာရုံတွေကို ပြန်ဆက်စပ် မိတဲ့အခါ hippocampus ကိုလှုံ့ဆွ ပေးတာ ပါ။ ဦးနှောတ်ငယ် (Cerebellum) ကတော့ ကြွက်သား တွေကို ထိန်းချုပ် ထားပြီး လှုပ်ရှားမှု တစ်ခု ချောမွေ့အောင် ထိန်းပေးတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါ တယ်။ Amygdala ကတော့ စိတ်ခံစားမှု တွေကို စုစည်း ထိန်းချုပ် ပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါ။ Anterior insula ဆိုတဲ့ နေရာ ကတော့ မိမိ ကိုယ် ခန္ဓာရဲ့ ပကတိ အခြေအနေကို ပြန်သုံးသပ် ပေးပါတယ်။ Nucleus accumbens နဲ့ Ventral tegmental area နေရာတွေ ကတော့ စိတ် ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ကြည်နူးမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ dopamine ကိုထုတ်လွှတ် ပေးတဲ့ နေရာတွေပါ။ Pituitary gland ကတော့ နာကျင်မှုကို သက်သာ စေပြီး ယုံကြည်မှုနဲ့ သံယောဇဉ် တွေကို တိုးပွားစေတဲ့ ဓာတု ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ပေး ပါတယ်။ ကျား/မ ကွာခြားချက်များ
လိင်မှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျားနဲ့မ ဦးနှောက်မှာ ကွာခြားချက် မများလှ ပါဘူး။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီး တွေမှာပါ လိင်ကိစ္စ အထွဋ်အထိပ် ရောက် ပြီးမြောက် တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်ဘက် မျက်လုံး နောက်ဘက်နဲ့ မျက်လုံး အိမ်အနီး ဦးနှောက် ရှေ့ပိုင်းနေရာ (Orbitofrontal cortex) တွေ အလုပ် မလုပ်ဘဲ ရပ်တန့် သွားပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဦးနှောက်ရဲ့ အခြေအနေဟာ ဘိန်းအရှိန်နဲ့ မှိန်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက် အခြေအနေနဲ့ ၉၅ရာခိုင်နှုန်း လောက် တူနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံ နေချိန် မှာတော့ အမျိုးသမီး များရဲ့ ဦးနှောက်က အနည်း ငယ် ကွာခြားပါတယ်။ အမျိုးသမီး တွေမှာ periaqueductal gray လို့ခေါ်တဲ့ ခြင်ဆီရည်တွေ ပြည့်နေတဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အခန်းသုံးနဲ့ လေးကို ဆက်ထားတဲ့ ပြွန်ချောင်း ပတ်ဝန်းကျင် နေရာက ဆဲလ်တွေ လှုံ့ဆွခံရပြီး စိတ်လှုပ်ရှား လွန်းရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ ထွက်ပြေး မလား၊ ပြန်ခုခံ မလား ဆိုတဲ့ စိတ်အခြေအနေမျိုး ("fight or flight" response) ဖြစ်ပေါ်လာ စေပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ စိုးရိမ်မှု တွေကို ကိုင်တွယ် ပေးတဲ့ amyg dala နဲ့ hippocampus တို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ လျော့ကျ သွားပါတယ်။ နာကျင်မှု ဝေဒနာနဲ့ ပတ်သက် နေတဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းကို လှုပ်ရှား စေပါတယ်။ သတင်းပြန်ပို့ အာရုံ ကြောစနစ်
ကျောရိုး အာရုံ ကြောမကြီး (spinal cord) နဲ့ဦးနှောက်သို့ သတင်း ပြန်ပို့ပေးတဲ့ အာရုံကြောတွေ မရှိရင်လည်း လိင်ကိစ္စ ပြီးတဲ့ ခံစားချက် (orgasm) ကိုမရရှိ နိုင်ပါဘူး။ အမျိုးသမီး တွေမှာ သားအိမ် (uterus) နဲ့သားအိမ် လည်တံ (cervix)၊ အမျိုးသား တွေမှာ ဆီးကျိတ် (prostate) ကနေ ခံစားမှု အာရုံတွေကို hypogastric nerve ကတဆင့် ပို့ပေးပါတယ်။ Pelvic nerve တွေကတော့ အမျိုးသမီး တွေမှာဆို မွေးလမ်း ကြောင်း (vagina) နဲ့သားအိမ် လည်တံ၊ ကျားမ နှစ်ယောက် စလုံးမှာ စအို အပေါ်ဘက် အစာဟောင်းအိမ် (rectum) ကခံစားမှု အာရုံတွေ ကို ပြန်ပို့ အစီရင်ခံ ပေးတာပါ။ Pudendal nerve ကတော့ အမျိုးသမီး တွေရဲ့ လိင်တံငယ် (clitoris) နဲ့အမျိုးသား များမှာ ကပ္ပာယ်အိပ် (scro tum) နဲ့လိင်တံ (penis) တွေကနေ ခံစားမှု အာရုံတွေကို ပေးပို့ပါတယ်။ Vagus nerve ကတော့ သားအိမ် လည်တံ၊ သားအိမ်နဲ့ မွေးလမ်း ကြောင်း တို့က ခံစားမှု တွေကို ပို့ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံ ဆန္ဓနဲ့ ဒုတိယ တန်းစား ဆန္ဓ (Desire: Primary vs. Secondary)
အခြေခံ ကျတဲ့ ပင်မဆန္ဓတွေ ဆိုတာ ကတော့ မျိုးနွယ်စုတစ်ခု ရှင်သန် နေထိုင်ဖို့ အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အစားအသောက် တပ်မက် ခြင်း၊ မျိုးဆက် ပွားဖို့ လိင်ကိစ္စ တပ်မက်ခြင်းနဲ့ စားဝတ်နေရေး အခြေခံ လိုအပ်ချက် များကို တပ်မက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြပြီး ဒုတိယ တန်းစား တ ဆင့်ခံ ဆန္ဓတွေ ကတော့ ငွေကြေး၊ အာဏာ၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဂိမ်းကစားခြင်း တွေလို ဆန္ဓတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒတွေ အားလုံးဟာ ဦးနှောက် ကို လှုံ့ဆော်ပုံခြင်း မတူကြပါ။ ပြင်သစ် သုတေသီ များဟာ လိင်စိတ် ကြွစေတဲ့ ပုံရိပ်တွေလို အခြေခံ ကျတဲ့ ပင်မဆန္ဓ တွေက ဦးနှောက်ရဲ့ မျက်လုံး အိမ်နား ဦးနှောက်ရှေ့ပိုင်း (orbitofrontal cortex) ကိုလှုံ့ဆွ ပေးပြီး ငွေကြေး၊ အာဏာစတဲ့ အဓိက မကျတဲ့ တစ်ဆင့်ခံ ဆန္ဓတွေနဲ့ ကွာခြားတာကို လေ့လာ တွေ့ရှိခဲ့ ကြပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား ဝေဒနာများ
လိင်စိတ်ကို ကြိုးကိုင်တဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်း တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထူးထူးခြားခြား ရောဂါ တွေလည်း ရှိခဲ့ဖူး ပါတယ်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ်မှာ Mrs. C. W. ဟာတစ်ညမှာ လိင်ဆက်ဆံ နေသလို ခံစားမှုမျိုးနဲ့ တရေးနိုးလို့ လာပါတယ်။ ပြီးတော့ တက်သွား ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာဝန် တွေက ဦးနှောက် သားကို ဖိနေတဲ့ အကျိတ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ ကြပါတယ်။ အကျိတ်ကို ထုတ်လိုက် တာနဲ့ သူမ နေပြန်ကောင်း သွားပါ တော့တယ်။ ၁၉၆၉ တုန်းကလည်း လူနာ တစ်ယောက်ဟာ စိတ်ကြည်နူး တာမျိုး ခံစားနေ ရတတ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံ ပြီးနောက် တစ်ခါတစ်ရံ တက်တတ် ပါတယ်။ ဆရာဝန် တွေက အတက် ရောဂါလို့ နာမည် တပ်လိုက် ကြပြီး ဆစ်ဖလစ် ရောဂါကြောင့် ဦးနှောက် တစ်နေရာ ပျက်စီးသွား ရတာလို့ ကောက်ချက်ချ ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၀၄ မှာတော့ ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံသူ တစ်ယောက်ဟာ သွားတိုက်တိုင်း လိင်စိတ် အထွဋ်အထိပ် ရောက်သလို ခံ စားမှုမျိုး ရရှိပြီး သတိလစ် သွားတာမို့ ဆရာဝန် ပြကြည့်တော့ အတက် ရောဂါလို့ နာမည် တပ်ပြီး ဦးနှောက် တစ်နေရာ ချို့ယွင်း သွားလို့ ဖြစ် ရတာ ပါလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဦးနှောက်ဟာ သိပ္ပံပညာနဲ့ မဖော်ထုတ်၊ နားမလည် နိုင်သေးတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် တွေနဲ့ ပြည့်နှက် နေတဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး လိင်စိတ် ကိုလည်း ကြိုးကိုင် စွမ်းဆောင် နိုင်ကြောင်း လေ့လာ သိရှိနိုင် ကြပါတယ်။ Images from sensa, blisstree, salon, huffpost, aufeminin, cankler, youngforlife. Source: discovermagazine.com, science.howstuffsworks.com, medicalbilingandcoding.org